Zvitsva zvinowedzeredzwa zve AMD GPU zvakawedzerwa kuKernel | Linux Vakapindwa muropa
Zvitsva zvinowedzeredzwa zve AMD GPU zvakawedzerwa kuKernel
Munguva yeCES 2019 yakaitwa svondo rapfuura muVegas, mazhinji evakuru vezvigadzirwa zvehardware, pamwe nemakambani anogadzira software akaburitsa yavo yazvino nhau, pamwe nehurongwa hwavo hweramangwana.
Mune ino AMD yanga isiri kumashure uye yakazarura dzinoverengeka zvezvigadzirwa zvacho zvitsva izvo zvichange zviri kujoina yayo katarogu irimo mukati megore rino, Unogona kutarisa izvi mune inotevera chinongedzo.
Uye ndeyekuti AMD haidi kusiiwa kumashure Zvakanaka, panguva yeCES yakaburitsa makadhi ayo emifananidzo matsva, ayo anotarisirwa kuve mhinduro inogutsa kupfuura iyo inopihwa nemukwikwidzi wayo mukuru AMD.
Zvakare panguva yechiitiko ichi AMD yasimbisa kuzvipira kwayo kune vashandisi veLinux uye kusimudza kwete chete zvinotarisirwa, asiwo kusimudzira kuvandudza nekushanda kweavo maLinux madhiraivha.
Mushure mekunge timu yekuvandudza ye AMD yatanga kugovera mutyairi wavo yakananga kuLinux kernel, varidzi vezvivakwa zvekambani vari kugamuchira kuvandudzwa kwekuita uye kuitiswa kutsva mukuburitswa kwega kwega.
Iko kushanduka kweiyo AMDGPU, pamwe neakavhurika sosi mutyairi, inozivikanwa kana ichienzaniswa neyakaregwa Catalyst / fglrx.
1 AMD inoda kudzoreredza ivhu pane vashandisi veLinux
1.1 AMD ichakwanisa here kudzorerazve kuvimba kwevashandisi veLinux?
AMD inoda kudzoreredza ivhu pane vashandisi veLinux
With ichi zvinoita kuti iyo AMD timu yanga ichinyanya kutarisisa kune iyo Linux chikuva, sezvo vhezheni 4.21 yeLinux Kernel izere nenhau dzevashandisi ve AMD.
Imwe yacho ndeye FreeSync uye inoshanduka-Sync rutsigiro, iyo inobatsira mukubvisa lags uye furemu muyero misiyano, zvine simba kugadzirisa mwero wekuvandudza.
Como Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kuwana unotsvedzerera uye wakatsetseka Gameplay, senge Kubvarura uye skrini masara, mune Gameplay.
Vamwe venyu mungayeuke kuti FreeSync yakaziviswa muna2014, kukwikwidza nemukwikwidzi wayo weG-Sync, tekinoroji yaNvidia, iyo inonyanya kuita inoenderana yekuenderana.
Zvisinei, Adaptation-Sync ndeye DisplayPort uye HDMI kududzirwa, kwakagadziriswa neInternational VESA Sangano, iro rinovavarira kumisikidza mashandiro evhidhiyo zvigadzirwa mumakomputa.
FreeSync inoshandisa Adaptive-Sync protocols pamwe chete nehurdware uye software kuti ipe inotsvedzerera, inokanganisa-isina, yakaderera-latency Hardware inoitsigira.
Humwe hutekinoroji hwakabatanidzwa mu AMD muLinux Kernel 4.21 iyo inogona kusimbiswa ndiwo anoenderana nemwenje manejimendi, ichideredza nhanho yemwenje wekumashure kuchengetedza simba nekuwedzera musiyano uye pixel kupenya kuti zviverengeke zviri nani uye mhando.
Uye kune rimwe divi tinaro ROCM, inova ndiyo yakatakurwa mukudyidzana pakati peiyo CPU neGPU, iyo inowedzera mashandiro emabasa ekuverenga pakombuta.
Iyo Linux kernel inotsigira ROCM pane yekuisa mifananidzo ma processor, iyo Polaris yekuvaka pane iyo RX 400 uye Vega 12 akateedzana makadhi evhidhiyo.
Nezve izvi isu tinogona kutarisira kuvandudzwa kwevashandisi ve AMD GPUs muLinux, iine mashandiro aive asipo kare mu AMDGPU.
AMD ichakwanisa here kudzorerazve kuvimba kwevashandisi veLinux?
Pasina zvakawanda wega Inosara yekumirira uye kuona kuti basa re AMD rinokura sei mukati megore rino yakanangana neLinux, sezvo rimwe rematambudziko makuru reichi chiri kuunzwa kweiri graphic driver.
Izvo zvinosiya kuravira kwakashata mumuromo wevakawanda vedu vane komputa ine kadhi yemifananidzo, processor kana yakatsaurwa kadhi yemifananidzo.
Zvakanaka, mumakore achangopfuura pakange paine shanduko huru pachikamu che AMD kuenda kune vashandisi veLinux uko avo vakagamuchira rutsigiro razvino uye rwuchienderera mberi ndeavo vakawana zvigadzirwa zvavo zvichangoburwa.
Uye avo vaive nechigadzirwa chegore rimwe, maviri kana anopfuura, rutsigiro rwanga rwakamira kana kuti rwakamhara, waifanirwa kusarudza madhiraivhu akavhurika kana kushandisa shanduro dzeXorg dzinoenderana neshanduro yazvino yemutyairi yakapihwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zvitsva zvinowedzeredzwa zve AMD GPU zvakawedzerwa kuKernel
Idzi gadziriso dzinozove dzezvigadzirwa zvavo zvechangobva kuitika, izvo zvatave nazvo zvekare zvicharamba zvichisungirirwa kune mutyairi wemahara, uyo kunyangwe uchishanda zvirinani kupfuura zvemaNVidia zvemahara, maficha uye mabasa anongowanikwa mukushandisa kwekushomeka ari kushomeka: gadzira chinja pakati peiyo graphic yakatsaurwa uye iyo yakasanganiswa zvinoenderana nezvinodiwa (parizvino iyo yakazvipira graphic printer yakaremara nekutadza), gadzirisa kusiyanisa maparamende nekuti mune yangu screen harigone neyeyish tint iyo matairi uye inomanikidza kushandisa iyo Redshift kunyorera nefaira rekushandurwa uye rakagadziriswa dhizaini kuti udzore ivo vachena uye vafundisi (pasina icho chishandiso chokwadi chaisazokwanisa kushandisa GNU / Linux), pakati pemamwe ma parameter. Kusagutsikana zvachose kuti maSrs eADD anondikonzera ... asi chokwadika ... ini handigone uye handina kodzero yekunyunyuta, zvese izvi mahara sezvo vamwe vanogadzira vanotuka.
Adobe Flash icharemara nekukanganisa muFirefox 69